နွေရာသီရောင်းရငွေကိုခံစားပါ။ ကူပွန် Code: "နွေရာသီရောင်းချ"
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီသည်သင် ၀ ယ်ယူသောအခါသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူသောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြုကြောင်းနှင့်မျှဝေပုံကိုဖော်ပြသည် ဇို ("ဆိုက်") ။
ဆိုက်ကိုသင်လည်ပတ်သောအခါ၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဘရောက်ဇာ၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ အချိန်ဇုန်နှင့်သင်၏စက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောကွတ်ကီးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်သင်၏ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်စုဆောင်းသည်။ ထို့အပြင်သင်ဆိုက်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသောအခါကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်သင်ကြည့်ရှုသည့်ထုတ်ကုန်များ၊ မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကသင့်အားဆိုက်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ သင်ဆိုက်နှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုအလျောက်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို“ Device Information” ဟုရည်ညွှန်းသည်။
-“ ကွတ်ကီးများ” သည်သင်၏စက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထားရှိပြီးမကြာခဏအမည်မသိထူးခြားသည့်အမှတ်အသားပါသောအချက်အလက်ဖိုင်များဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့် cookies များကိုမည်သို့ disable လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ ကွတ်ကီးအကြောင်းအားလုံး.
- ဆိုက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောလုပ်ရပ်များကို“ မှတ်တမ်းဖိုင်များ” နှင့်သင်၏ IP လိပ်စာ၊ ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား၊ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ရည်ညွှန်း / ထွက်စာမျက်နှာများနှင့်ရက်စွဲ / အချိန်တံဆိပ်များစသည့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ။
-“ Web beacons”,“ tags” နှင့်“ pixels” သည်ဆိုက်အားသင်ကြည့်ရှုပုံနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အသုံးပြုသောအီလက်ထရောနစ်ဖိုင်များဖြစ်သည်။
-“ Facebook pixels” နှင့်“ Google Adwords Pixel” သည် Facebook နှင့် Google တို့ပိုင်ဆိုင်သောအီလက်ထရောနစ်ဖိုင်များဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေသည်။
ထို့အပြင်သင်ဆိုက်မှတဆင့် ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားသောအခါသင်၏အမည်၊ ငွေတောင်းခံရန်လိပ်စာ၊ ရေကြောင်းလိပ်စာ၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များ၊ PayPal အပါအဝင်)၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နံပါတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်ကို“ အမိန့်သတင်းအချက်အလက်” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းအချက်အလက်နှင့်အမိန့်သတင်းအချက်အလက်နှစ်ခုလုံးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Inc. မှပေးသောထုတ်ကုန်နှင့်အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;“ Google”) ။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ Google Tag Manager အသုံးပြုသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ဂူဂဲလ် Tag မန်နေဂျာသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမစုဆောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ tags များ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူစေသည်။ Tags များသည်သေးငယ်သည့်ကုဒ်ဒြပ်စင်များဖြစ်ပြီးအသွားအလာနှင့် visit ည့်သည်တို့၏အပြုအမူကိုတိုင်းတာရန်၊ အွန်လိုင်းကြော်ငြာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
Google Tag Manager အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက - မူဝါဒကိုသုံးပါ
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Google Analytics ၏သရုပ်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဂူဂဲလ် Analytics မှကွန်ရက်စာမျက်နှာအားအသုံးပြုသူများဆိုက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင်၏ကွန်ပြူတာထဲတွင်ထည့်ထားသောစာသားဖိုင်များဖြစ်သော“ cookies” ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော cookie မှထုတ်ပေးသောသတင်းအချက်အလက် (သင်၏ IP လိပ်စာအပါအဝင်) ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆာဗာများပေါ်တွင်ဂူဂဲလ်မှကူးယူပြီးသိမ်းဆည်းမည်။
ဂူဂဲလ် Analytics အား gat._anonymizeIp (); ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အမည်ဝှက်ထားသောအိုင်ပီလိပ်စာများစုဆောင်းရန် (IP-masking ဟုခေါ်သည်) ကိုအာမခံရန်။
IP အမည်ဝှက်ခြင်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါဂူဂဲလ်သည်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောအခြားသူများအတွက်အိုင်ပီလိပ်စာ၏နောက်ဆုံးရှစ်လုံးတွဲကိုခုတ်လှဲ / အမည်ဝှက်လိမ့်မည်။ ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်သာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဂူဂဲလ်ဆာဗာများက IP လိပ်စာအပြည့်အစုံကိုပေးပို့ပြီးတိုစေသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပံ့ပိုးသူကိုယ်စား၊ ဂူဂဲလ်သည်ဤအချက်အလက်များကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများကိုစုဆောင်းရန်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပံ့ပိုးသူအား ၀ က်ဘ်ဆိုက်လှုပ်ရှားမှု၊ ဂူးဂဲလ်ကသင်၏ IP လိပ်စာကိုဂူဂဲလ်မှသိမ်းထားသောအခြားဒေတာများနှင့်ဆက်စပ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ဘရောင်ဇာပေါ်ရှိသင့်တော်သောချိန်ညှိချက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ပါကဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ထို့အပြင် Google ၏အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို (cookies နှင့် IP address) အောက်မှရရှိနိုင်သည့် browser plug-in ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တားဆီးနိုင်သည် အသေးစိတ်.
သင်သည်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Google Analytics အသုံးပြုမှုကိုငြင်းဆန်နိုင်သည်။ ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် opt-out cookie တစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသောအခါသင့်အချက်အလက်များ၏အနာဂတ်စုဆောင်းမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။
အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အချက်အလက်များသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် ဝေါဟာရများ သို့မဟုတ်မှာ pသံလွင်သီး. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဂူဂဲလ် Analytics ကုဒ်ကို“ anonymizeIp” ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်ကိုသတိပြုပါ။ (အမည်မဖော်လိုသော IP လိပ်စာများစုဆောင်းခြင်းကို IP-masking ဟုခေါ်သည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ကို ဖြတ်၍ trivago ကိုအထူးသဖြင့်ဂူဂဲလ်ပြသမှုကွန်ယက်တွင်ကြော်ငြာရန် Google Dynamic Remarketing ကိုအသုံးပြုသည်။ Dynamic remarketing သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတွင် cookie ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မည်သည့်အပိုင်းကို အခြေခံ၍ သင်အားကြော်ငြာများကိုပြလိမ့်မည်။ ဤ cookie သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှသင့်အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်း (သို့) သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။ cookie ကိုအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ “ ဤအသုံးပြုသူသည်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးထိုစာမျက်နှာနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများကိုပြပါ။ ” Google Dynamic Remarketing ကသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများကိုသာပြသနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။
trivago မှကြော်ငြာများကိုသင်မကြည့်လိုပါကဂူဂဲလ်၏ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းအားသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားရှောင်ရှားနိုင်သည် ဂူဂဲလ်၏ကြော်ငြာချိန်ညှိချက်များ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် Google ၏သွားရောက်ကြည့်ရှု ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ.
Google မှ DoubleClick
DoubleClick သည်အကျိုးအမြတ်ကိုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာများကိုဖွင့်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ cookies များသည်မည်သည့်ကြော်ငြာကို browser ထဲတွင်ပြသခဲ့သည်ဆိုသည်နှင့်သင်ကြော်ငြာမှတဆင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ၀ င်ရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုဖော်ထုတ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမစုဆောင်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ် ၀ င်စားမှုအခြေပြုကြော်ငြာများကိုမကြည့်လိုပါကဂူဂဲလ်၏ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဂူဂဲလ်၏ကြော်ငြာချိန်ညှိချက်များ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် Google ၏သွားရောက်ကြည့်ရှု ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ.
retargeting tags များနှင့် Custom Inc. ကိုကုမ္ပဏီအင်စတီကျုမှပေးသော (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA,“ Facebook”) ကပေးသည်။
စိတ် ၀ င်စားမှုကိုအခြေခံသည့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook Custom Audiences ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင့်အသုံးပြုမှုဒေတာမှပြန်လည်ပြောင်း။ မရသောနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်သောစစ်ဆေးခြင်း (hash value) ကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်း hash တန်ဖိုးအား Facebook သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်ကူးယူနိုင်သည်။ စုဆောင်းရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏ trivago NV (ဥပမာကြည့်ရှုခြင်းအပြုအမူ၊ ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာငယ်များစသဖြင့်) ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများပါ ၀ င်သည်။ သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာကိုလည်းကူးယူပြီးကြော်ငြာကိုပထဝီဝင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့သာစာဝှက်ပေးပြီးသုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအမည်ဝှက်ထားပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် Custom Audience တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ Facebook သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ or စိတ်ကြိုက်ပရိသတ်။ Custom Audience မှတစ်ဆင့် data ရယူခြင်းကိုမလိုချင်ပါက Custom Audience ကိုပိတ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Remote Tag များအကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါသင်၏ browser နှင့် Facebook server တို့အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့သင်၏ IP လိပ်စာဖြင့်သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။ ဤအရာသည်သင်၏ Facebook ကိုသင်၏အသုံးပြုသူအကောင့်သို့သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ Facebook ကြော်ငြာများပြသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပံ့ပိုးပေးသူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကူးစက်ခံထားရသောအချက်အလက်များ၏အကြောင်းအရာနှင့်၎င်းကို Facebook မှမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုမသိပါ။
Facebook ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်း Pixel
ဤကိရိယာသည် Facebook ကြော်ငြာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပံ့ပိုးသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့၎င်းတို့ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးနောက်သုံးစွဲသူများ၏လုပ်ရပ်များကိုလိုက်နာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရင်းအင်းနှင့်စျေးကွက်သုတေသနအတွက် Facebook ကြော်ငြာများ၏ထိရောက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များသည်အမည်ဝှက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော်၊ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကို Facebook မှသိမ်းဆည်းပြီးဆောင်ရွက်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားပါသည်။ Facebook သည်အချက်အလက်များကိုသင်၏ Facebook အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးအောက်ဖော်ပြပါဖေ့စ်ဘွတ်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Facebook သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ. Facebook Change Tracking သည် Facebook နှင့်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားသင့်အား Facebook နှင့်ပြင်ပရှိသင်၏ကြော်ငြာများကိုပြသရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် cookie များကိုသင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည် Facebook pixel ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုသဘောတူသည်။
သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ ကြော်ငြာချိန်ညှိချက်များ.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးတွင်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများအပါအ ၀ င်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများသည်ဆိုက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂူဂဲလ် Analytics ကိုအသုံးပြုသည်။ ဂူဂဲလ်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သီးသန့်လုံခြုံရေး. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout: ကိုလည်းသင်ကဒီမှာ Google Analytics ၏-ဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်၊ ဆင့်ခေါ်စာကိုလက်ခံရန်၊ ရှာဖွေခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်အတွက်အခြားတရားဝင်တောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင့်အားစိတ်ဝင်စားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ မည်မျှပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာသည်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Network Advertising Initiative (“ NAI”) ပညာရေးစာမျက်နှာသို့သွားပါ အောက်အွန်လိုင်းကြော်ငြာခြင်း tanding.
ဒါ့အပြင်ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုတချို့ထဲကဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဖယ်ထုတ်ခြင်းပေါ်တယ်ကိုသွားခြင်းအားဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့.
သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုငွေသွင်း။ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားစာသားအကြောင်းကြားချက်များ (စွန့်ပစ်ထားသောလှည်းသတိပေးမှုများအပါအ ၀ င်) သင့်အားစာသားအသိပေးချက်များပေးပို့ရန်နှင့်စာသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင်သဘောတူသည်။ စာသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများတစ်လလျှင် 15 ထက်မပိုရလိမ့်မည်။ သင်သည်နောက်ထပ်စာတိုပေးပို့ချက်များမှပယ်ဖျက်နိုင်သည် ရပ်။ မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်ဒေတာနှုန်းထားများသက်ဆိုင်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်၌မေးခွန်းများရှိလျှင်သို့မဟုတ်တိုင်ကြားလိုပါကအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ [အီးမေးလျ protected]
မူပိုင်ခွင့်© 2020 ပျော်ရွှင်စရာ